web page တွေကို ဖြတ်ညှပ်ကပ် လုပ်ပြီး online ကနေ Print ထုတ်ရအောင်
ဒီနေ့ ကျွန်တော် ဘလော့မိတ်ဆွေများ အတွက် အွန်လိုင်းကနေ website တွေကို Print ထုတ်လို့ရတဲ့ ဆိုဒ်လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
မိမိနှစ်သက်တဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုက ဘလော့စာမျက်နှာ တွေကို ဆိုဒ်လိပ်စာရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရင် ဆိုဒ်ပေါ်လာပြီး ကိုယ်လိုသလောက်ကိုပဲ ဖြတ်ယူလို့ရပါတယ် ပြုပြင်တာစိတ်ကြိုက်ရပြီဆိုရင်တော့ print ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဗျာ
http://www.printwhatyoulike.com/ ဒီလင့်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ကိုယ့်ကိုသာဆက်လုပ်လိုက်တော့် ဟိဟိ လစ်ပြီဗျာ ...
Posted by mother's heir at 5:19 PM No comments: Links to this post
CyberLink YouCam Deluxe 5.0.1129.18169 Multilanguage | 160 MB
Key features of "CyberLink YouCam":
Posted by mother's heir at 5:11 PM No comments: Links to this post
ESET NOD32 Antivirus v5.0.95.0 Final (x64-x86) Incl Keys-BRiNGiT | 128 MB
http://www.filejungle.com/f/DUyMEe/ESET NOD32 Antivirus v5.0.95.0 Final (x64-x86) Incl Keys-BRiNGiT.part1.rar
http://www.filejungle.com/f/jkaHQX/ESET NOD32 Antivirus v5.0.95.0 Final (x64-x86) Incl Keys-BRiNGiT.part2.rar
http://www.filesonic.com/file/H30iVd3/ESET NOD32 Antivirus v5.0.95.0 Final (x64-x86) Incl Keys-BRiNGiT.part1.rar
http://www.filesonic.com/file/SDSBPjH/ESET NOD32 Antivirus v5.0.95.0 Final (x64-x86) Incl Keys-BRiNGiT.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/5ynrnUZ/ESET NOD32 Antivirus v5.0.95.0 Final (x64-x86) Incl Keys-BRiNGiT.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/dbcrByK/ESET NOD32 Antivirus v5.0.95.0 Final (x64-x86) Incl Keys-BRiNGiT.part2.rar
Posted by mother's heir at 3:10 PM No comments: Links to this post
အခြေခံ ကွန်ပျူတာ ကို စနစ်ကျကျ သိရှိနားလည်စေရန်
၀က်ဆိုဒ်များ ကိုယ်ပိုင်ရေးတက် လာစေရန်
အဝေးရောက် မိမိ မိဘ ၊မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း များနှင့် မိနစ်ပိုင်း အတွင်း ဆက်သွယ်မှု ပြုလုပ်တက်စေရန်
3d ဒီဇိုင်းများ ဖန်တီးခြင်း
သင်တန်းသားတောင်းဆိုသော ဘာသာရပ်များကိုလည်း စိတ်ကြိုက် သင်ကြားပေးပါမည်။
ထိုင်းဖုန်း dtac ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အွန်လိုင်း ဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်နေ့လျှင် (၁) နာရီ မျှ သင်ကြားပေးသွားမည်။
မိမိ ကိုယ်တိုင် ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်ထိလာရောက်သင်ကြားလိုပါက လာရောက်သင် နိုင်ပါသည်။
teamviewer ဖြင့်၎င်း show my pc ဖြင့်၎င်း ammyy admin ဆော့်ဝဲလ်များကိုအသုံးပြုပြီး အွန်လိုင်း ကနေ လက်တွေ့သင်ကြားပေးသွားမည်။
အသေးစိတ်သိလိုပါက 0869104372 ,dtac သို့ ၄င်း sainayzawhtwe22@gmail.com သို့၎င်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဖောင် ဖြည့်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလော့ရယူပါ
pdf ဖိုင်လိုချင်ပါက ဒီမှာယူပါ
Posted by mother's heir at 3:08 AM No comments: Links to this post
ကဲစိတ်ဝင်စားမယ့် ချက်တင်အသစ်လေးပါ ဒီမှာဒေါင်းနော်..
အဆင့်ဆင့်သာလုပ်သွားလိုက်ပါ ...အောက်ကပုံမှာတော့် ဘယ်ဘက်က ဒေါင်းလော့ဗွီဒီယိုဘာညာနေရာကိုကလစ်နော်.... ပန်းသီး တစ်ခြမ်းမဟုတ်ဘူး...
ကဲဆက်လုပ်သွားဗျာ cancel မဟုတ် ရင်ကြိုက်တာလုပ် အာမခံတယ် ဟိဟိ ..
finished ရောက်တဲံအထိလုပ်သွားလိုက် အီးမေးလ်တွေဘာညာသာရကာတွေသူမေးလိမ့်မယ်ဖြေလိုက်
အားလုံးနောက်ဆုံးမှာ close ဆိုတာရှိတယ်...နှိပ်လိုက်ပြီးရင် အကောက်လုပ်တဲ့ အီးမေးလ် ကိုဝင်ပြီး...
comfime လုပ်လိုက် ပေါ့ ...ဒါဆိုသုံးလို့ရပြီး....ချက်ပုံချက်နည်းကတော့်စမ်းသာကြည့်လိုက် ကောင်းတာောတ့်အမှန်ပေါ့
ဦးနှောက်ဆိုတာသွေးမှ ထက်တယ်ဆို့လို့ ဆက်မရေးပေးတော့်တာ..ဟိဟိစမ်းကြည့်လိုက်နော်
ဘဲချောချောလေး ပုံတင်ပေးထားတယ် အောက်မှာလေတွေ့လား ...ဟိဟိ ....အဲလို ၀င်းဒိုးကျလာမယ်နော်...အဲကနေ စိတ်ကြိုက်သာလုပ်ကြတော့်ဗျာ
ဘယ်လိုပဲပြောပြော လန်းလန်းလေးတွေနဲ့ချက်ရတော့် စိတ်ချမ်းသာမယ်ထင်တယ်..ဗွီဒီယိုရုပ်လေးပါကြည့်ပြီး...တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြောင်လို့လည်း
ရတယ်ဆိုတော့်ဟိဟိ စမ်းကြည့်လိုက်ကြတော့်ဗျာ...လက်ညောင်းနေပြီ စာရေးရတာ...
Posted by mother's heir at 4:21 AM No comments: Links to this post
ဘုရားဆိုတာဘယ်လိုလူလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာ၏အနှစ်ချုပ် ဘာသာတရားသိထားစရာအဖြာဖြာ စည်းရိုး ဘုရားဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလည်း ၀တ်ထားတဲ့သက္ကန်းနဲ့ထိုက်တန်ရဲ့လား
ဗုဒ္ဓတရားတော်များ. တရားဓမ္မ၀က်ဆိုဒ် ဦးဥုးမင်္ဂလတရားတော်.. ဦးဇောတိက မိုးကုတ်ဆရာတော်တရားတော် ဆရာတော် ဦးဃောသိတ ဆင်ဖြူကျွန်းဆရာတော် အောင်ဆန်းဆရာတော် မဟာစည်ဆရာတော်ဦးသောဘနမဟာသာရ ဖြူးဆရာတော်. အရှင်ဆန္ဒဓိက သီတဂူဆရာတော် မင်းကွန်းဆရာတော် မဟာဗောဓိတထောင်ဆရာတော် မိုးညင်းဆရာတော် ကြာနီကန်ဆရာတော် ပဲခူးအောင်သုခဦးစန္ဓိမာ ယောဆရာတော် သဲအင်းဂူဆရာတော် မြစိမ်းတောင်ဆရာတော် အောင်မဂ်လာ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ရာဇိန္ဒ္ဒ အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်) ရွှေပြည်သာ
ဓမ္မ၀က်ဆိုက်ဒ်များ ဓမ္မဒေါင်းလော့်ဝက်ဆိုဒ် ဓမ္မသီချင်းများ ။ ရုပ်ရှင်များ။ VCD များ ဓမ္မသီချင်းများ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်.တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်များ.. ဓမ္မ ဘဏ်တိုက် ကြီးထဲမှာ တန်ဖိုးရှိတာတွေပဲ
ဘာသာကြီး(၄)ခု ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်း ခရစ်ယာန်ဘာသာသမိုင်း အစ္စလာမ်သမိုင်း
နည်းပညာများ အမေ့သားလေး ဆိုဒ် အာကာဖြိုး kayah ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အာကာဖြိုး ဘလော့ ကိုညီနေမင်း ကေပီ၃ နည်းပညာ sawsan's blog ကိုမြတ်(နည်းပညာတို့၏ဆုံမှတ်များ) လင်းလဲ့ဦး ဧရာညီနောင် စုဆောင်းထားသောဝက်ဆိုဒ်များ နေမင်းခေတ်(နည်းပညာ) ကောင်လေးငယ် ပိုတိုရှော့သင်တန်း PHP ကိုမြန်မာလိုလေ့လာမယ် ပြည်ပပညာသင်လိုသူများ အွန်လိုင်းဘားဂလိမှမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုဒ် flash ဟာသဆိုဒ် 24 ဘာသာပြန်ဆိုဒ် ကိုဖြိုး(စိတ်ကူးအပိုင်းစလေးများ)
ဒီနေရာမှာ ခေါင်းစဉ်ထည့်ပါ ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့် english သင်ချင်ရင် ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့်
သိထားသင့်တဲ့ ဟက်ကင်းအကြောင်း ဂျီမေးလ်ဟက်မယ် ၀င်းဒိုးအက်ဒမင်အကောက်ကိုဖျက်မယ် ဂျီမေးလ်အကောက်ကိုဘယ်လိုဖောက်မလည်း ဟက်ကာစကားပြောသင်တန်း ၀င်းဒိုးအက်ဒမင်အကောက်ကိုဖျက်မယ် ပိတ်ထားသောဝက်ဆိုဒ်ကိုဖွင့်မယ် အကျော်ဝါသနာပါသူများ ပတ်ဝေါ့ကိုပြန်ကြည့်ရအောင် ဂျီမေးလ်ဟက်ချင်သူများ Training Website Hacking Hacker တစ်ယောက်၏ ကျင့်ဝတ်များ သိသူဖော်စား မသိသူကျော်လား wifi hacks 2009! access denied ကိုကျော်ဖို့
ဗုဒွဘာသာကို စော်ကား သောဝတ်ဆိုက်ဒ် တစ်ခု ကို မဖြစ်မနေ ဖတ်ပေးကြပါရန် .............ကျွန်တော်တို့.
သန်းရွှေနှင့် ဂေါတာမ လုပ်တာမဟုတ် မဟုတ်တာလုပ် ယခုအကြောင်းအရာသည်ခေါင်းစီးနှင့် လွဲကောင်းလွဲနိုင်သည်........ ဂေါတာမ၏ဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိတွင် ပြောစရ...
Softwares များဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် ဒီနေရာကို ကလစ်ပါ
DreamLight Photo Editor Easy File Protector 2.8 Easy GIF Animation Edit Photo Peditorinst Ehoto Effect Ez Photo Calendar Creator p...
ဘလော့ ပေါ်မှ feedburner လုပ်နည်း
ဘလော့ ပေါ်မှ feedburner လုပ်နည်း များကို ဒီနေရာတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးက လူတော်တော်များများ .. မျက်စိမှိတ်ထားကြတော့် အဲဒါလေးကို မီးမှောင်ထိုးပြချင်လို့ပါ ..နိုင်ငံခြားတွေမှ...
သီချင်းချစ်သူတွေအတွက် downloader အသစ်လေး..
Easy Mp3 downloader / File size : 4.5 MB Easy Mp3 downloader's နောက်ဆုံးထွက် versionလေးနဲ့မိတ်ဆက် ပေးချ...
ကဲဗျာ teamviewer နဲ့ အဆင်မပြေသူတွေအတွက် ပြီးတော့် ammy admin နဲ့လည်း သဘောမကျသူတွေအတွက် ရည်ရွယ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ...အဆင်ပြေသလိုကြည့်လုပ်လိုက...
Start Menu လန်းလန်းလေးနှင့် မိုက်မိုက်လေး သုံးလိုသူများဒေါင်းရန်
ဒီကောင်ကskin ကိုလဲ အမျိုးမျိုးပြောင်းနိုင်သေးသသဗျဒေါင်းထားလိုက်ပါဦးနော် ...စတက် ဘောတွန် လှလှလေးနဲ့ဆိုတော့် လန်းတာကိုကြိုက်တဲ့လန်းလန်းလေ...
G talk အကောက် အသစ် ဖွင့်လိုသူများ။။။။။။။။။။။။။။။။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဂျီးမေး ဖွင့်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ် ဖွင့်တိုင်းမှာ ဖုန်းနံပါတ်တောင်းပါတယ် ဒါကိုပြေလည်စေဖို့ လင့်ကလေးတစ်ခု လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ...
သီတဂူအငြိမ့် သီတဂူအငြိမ့် နေတိုးတို့အငြိမ့်နှစ်သစ်နှင်းဆီအငြိမ့်သီလေးသီးနှင့်ဆေးရောင်စုံအငြိမ့်ရွှေစင်ကြယ်အငြိမ့်
ဖျော်ဖြေရေးလင့်လေးများ ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့် ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့် ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့်
သီချင်းများ... သီချင်းနဲ့ MTV လေးတွေနားထောင်မယ် သီချင်းတွေ ဒေါင်းမယ်၊နားထောင်မယ် သီချင်းလေးတွေပါပဲ မြန်မာ့သီချင်းမြန်မာသီချင်း mp3 city FM flashband.netမြန်မာဒေါ့နက် ဘားမစ်ကလက်စစ်မြန်မာအောဒီယိုတူးမြန်မာမြူးစစ်သီချင်းနှင့်ဇတ်လမ်းအချို့ မြန်မာဂီတ
flash song တွေကိုဒီနေရာကနေနားဆင်ပါ မလွမ်းရဲသေးဘူး(L ဆိုင်းဇီ) အချစ်မျက်ဝန်း (L လွန်းဝါ) ယဉ်ယဉ်လေးရူး အမှန်တရား (လင်းလင်း) လိပ်ပြာ(လေးဖြူ) ခရီးများအဆုံးထိလျှောက် (လေးဖြူ) လက်နဲ့ ဖြည့်ခံထား ( big bag) အချစ်နဲ့အလွမ်း (၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း) တယ်လီပန့် စ် ..(big bag) တစ်မိုးအောက် (ပူစူး) တောင်းပန်ပါတယ်။ kayah songs အရကြူ့အရရေ (ကယားသီချင်း ) နယ်မျဘူးဘိုခါးလေးမို (ကယားသီချင်း) ပုံစံမတူတဲ့အချစ် ဒီဇင်ဘာဆိုဒ်ကြော်ငြာလုပ်ထားတဲ့ လည့်တည့်စမ်းထားတာပါလက်ခံပေးပါ(မျိုးကြီး) စလုပ်တဲ့လက်ရာလေးအချို့ပါမျက်နှာရင်ခွင်သစ် (အာဇာနည်)
ဒီနေရာမှာ ခေါင်းစဉ်ထည့်ပါ ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့် ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့် ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့်
ဗွီဒီယိုဇတ်ကားရွှေချည်ငွေချည်တန်းပါလို့ | ညွန့်ဝင်း ခင်ယုမေ ချိုပြုံး မောင်မင်းကြီးသား ကျွန်မရည်းစားမိန်းမယူမယ်ဆိုရင်..စဉ်စားဖို့လိုတယ် သူငယ်ချင်းယောက္ခမ လျှို့ဝှက်ဥယာဉ်/ဟိန်းဝေယံ အေးမြတ်သူပျဉ်းမငုတ်တို/ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်း၊နွဲ့နွဲ့မူဂျပန့်ရင်သွေး ဂျူးလိယက်တရေးနိုး/ပြေတီဦး၊မိုးဟေကို ဝေးလည်းမွှေးကြွေလည်းမွှေး | ကျော်ဟိန်း ဒွေး တင့်တင့်ထွန်း မြင့်မြင့်ခိုင် ကညာပျိုနဲ့ဇရာအို | ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်း ခင်သန်းနု စံရှားတင် မောင့်မူပိုင်ရှင် | ဒွေး လွင်မိုး ထွန်းအိန္ဒြာဗို ထက်ထက်မိုးဦး မြင့်မြင့်ခင် မဆိုးပါနဲ့ကောင်မလေး | စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ၀တ်မှုန်ရွှေရည် မြန်မာ့ဗွီဒီယိုများ လင့်
ဒီနေရာမှာ ခေါင်းစဉ်ထည့်ပါ ဘီဘီစီ ဒီဗွီဘီ အန်အိပ်ခ်ျကေ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ နက်ဝေါ့မီဒီယာ group ဘီဒီအမ်အေ မဇ္ဇျိမ ဧရာဝတီ ဟစ်တိုင် နိရဉ္စရာ မွန်သတင်း မိုးမခ မိုးသောက်ကြယ် ခါကာဘိုရာဇီ ရိုးမ(၃) မေခ ကိုထိုက် မျိုးချစ်မြန်မာ ဒီရေ ဆုံဆည်းရာ ကိုလျှာရှည် နစ်နေမန်း OPPOSITEYES LIGHTOFMYANMAR အခြားမြန်မာဘလော့များ
မြန်မာ့မော်ဒယ်များ မောဒယ်အဖေ မြန်မာမင်းသမီးများ၏ sexy ပုံများ (နည်းပညာဖြင့် သရုပ်ဖျက်ထားသည်လားတော့်မသိ ) ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့်
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ရှေးဦးပြုစုခြင်းနည်းပညာ မအိုမနာမသေဆေးအပါအဝင် မြန်မာ့ဆေးမြီးတိုနည်းများ ဦးနှောက်ပျက်စီးစေသည့်အကြောင်းရင်းများ တိုင်းရင်းဆေးနည်းလမ်း( ခါးနားခါးကိုက်) ကင်ဆာရောဂါအတွက် ထူးတဲ့အာလူး ၀မ်းချုပ်သော်မခက်လော ရောဂါဝေဒနာများနှင့် မြန်မာ့ဆေးစွမ်းကောင်းများ သွေးစုနာ (ခ) မွေးကျွတ်နာအတွက်ဆေးနည်း
ဒီနေရာမှာ ခေါင်းစဉ်ထည့်ပါ အချစ်၏အနက် ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့် ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့်
မိဘနှင့်သားသမီး မိဘတွေကို မပြောသင့်တဲ့ စကား(၁ဝ)ခွန်း crystaleye ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့် ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့်
သိတာကို မသိတာနဲ့ပေါင်းပြီး ..ကောင်းကောင်းကလိနိုင်ကြပါစေ ...
အီးမေးလ်ထားခဲ့လေ ..နောက်တစ်ခါ ကျရင်မေးလ်ကနေပဲဖတ်ပေါ့
Pokies | 888casino | AUSTRALIAN ONLINE CASINOS | Globe Counter | Casino Online
ကွန်ပျူတာအခြေခံ ... ကွန်ပျူတာအခြေခံ ဟာ့ဝဲလ် ဆော့်ဝဲလ် ကွန်ပျူတာထိန်းသိမ်းရေး html java လေ့လာဖို့ window7 genius လုပ်ဖို့ပါ ဘလော့ပိုင်းဆိုင်ရာများ ဗိုင်းရပ်ကြောင့် hidden ဖြစ်သွားသော အချက်အား ..ပြန်လည်ရယူနည်း။။
အွန်လိုင်းကနေပိုတိုရှော့သုံးမယ် online ကနေ ပိုတိုရှော့သုံးမယ် ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့် ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့်
ဒီနေရာမှာ ခေါင်းစဉ်ထည့်ပါ နက်ဝေါ့ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့် ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့်
G mail အမြန်ဖွင့်မယ် ချက်တင်နှင့်ဆိုင်သည်များသာ VZO/skype စတဲ့ နှစ်ခုဖွင့်မရတာတွေကို နှစ်ခုတပြိုင်နက်ထဲ ဖွင့်ရအောင် မလာစေချင်တဲ့မေးလ်ပိတ်နည်း ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့်
အလကားစာပို့နည်းများ တကမ္ဘာလုံးကိုဖုန်းခေါ်ချင်ရင် စာအလကားပို့နည်း နိုင်ငံတကာစာပို့နိုင်ပါသည်။
ဆော့်ဝဲလေးတွေစုစည်းရာformat factory 2.70 အင်တာနက်မချိတ်ထားပဲ lan ကနေ offline chat ကြည့်မယ် ဆော့်ဝဲလ်ပေါင်းစုံများဒေါင်းရန် noto ဆိုတဲ့ ..နေရာလေးမှာ မှတ်စုရေးလို့ရတယ်ဒေါင်းသွားနော် comfrog ချက်တင်လေးနဲ့ ပြောင်းချက်ကြမယ်alphazawgyi fontsဗွီဇက်အိုဒေါင်းရန်ဗွီဇက်အိုအကောက်သစ်ဖွင့်ရန် အင်တာနက်ဒေါင်းလော့မန်နေဂျာ pfingo ဒေါင်းလော့် ဒက်စတော့်ကိုလိုသလိုဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ဂျီတော့် အကောက်သစ်လုပ်ဖို့ဆော့်ဝဲလ်လေးပါpfingoအကောက်သစ်ဖွင့်ရန်pfingoသို့ဝင်ရန်teamviewer ဒေါင်းရန်စကိုက် skype download oovoo ဒေါင်းရန် ကယား နှင့်ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤜꤟꤤ꤬ကရင်နီ များ ဖောင့်ဒေါင်းရန် rocket dock နဲ့ ဒက်စတော့်မှာအလှဆင်ဖို့kaspersky.exe 76.42 antivirus 2012kaspersky internet security(kis)windows media player 117 zip for windows downloadflash player free download 10.3.ဒီနေရာလေးကနေယူသွားပါcyberlink youcan ဒေါင်းဖို့ပါဆော့်ဝဲလ်ကျေးရွာသို့swish4ပါ flash song သီချင်းလုပ်ဖို့အတွက်ပါ သီချင်းတွက်..အဖက်များနှင့်အထွေထွေ xara 3d စတိုင်လှလှလေးတွေလုပ်နိုင်အောင်ဒေါင်းလိုက်ပါ adobe flash player လေးပါpidgin လေးပါ ...ဂျီတော့်အစားထိုးဖို့ပါ ကော်နက်ကျရင်သုံးပါနော်...ဂျီတော့်အကောက်နဲ့ပဲဝင် xiuxiu ဆိုတဲ့ အပုံလေးတွေအမျိုးမျိုးလုပ်နိုင်တဲ့ ဆော့်ဝဲလ်လေးပါ Gimp 2.6 ပါ သိမယ်ထင်တယ် paint ထက်နည်းနည်းကောင်းတယ် စမ်းကြည့်ပါ Gadget ဒေါင်းလုပ်နိုင်ရန်
FLASH PLAYER 10 DOWNLOAD MOZILLA FIREFOX 3.6 DOWNLOAD VZOCHAT DOWNLOAD SKYPE DOWNLOAD Gtalk DOWNLOAD 7-Zip for Windows DOWNLOAD
အွန်လိုင်းမှာ html လေ့လာမယ် Photoshop သင်တန်း PHPကိုမြန်မာလိုလေ့လာဖို့ပြည်ပပညာသင်ချင်သူတွေအတွက် အွန်လိုင်းဘားဂလိမှမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုဒ်
သီချင်းအက်ဒစ်လမ်းညွန် သီချင်းစာသားတွေကို.. ဖော်ပြပေးတဲ့.. lyrics plugin အလန်းလေးပါ. ဒီဆော့်ဝဲလေးကိုဒေါင်းပြီးလုပ်ပါ. ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့်
စာအုပ်စင်ထဲတွင်..... ပိဋ္ဋကက် ၃ ပုံ PDFဖြင့် မာဏ၀ _ မိလိန္ဒပဥှာ ဒီနေရာမှာ နာမည်ထည့်
သည်စာမျက်နှာကို print လုပ်လိုပါက
nay zaw h t we(chiangmai). Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.